“Casa Morada” Na “Ilay Trano Volomparasy”, Fikambanana Iray Ao Medellin Any Kolombià ‘ Hamoronana, Hankafizana Ary Handinihan-tena’ · Global Voices teny Malagasy
“Casa Morada” Na “Ilay Trano Volomparasy”, Fikambanana Iray Ao Medellin Any Kolombià ‘ Hamoronana, Hankafizana Ary Handinihan-tena’
Voadika ny 24 Aogositra 2014 9:25 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Français, Ελληνικά, Español
Casa Morada. Sary nalain'ilay fikambanana, nahazoan-dàlana.
Any amin’ny toerana iray milamina, anatin’ny “Comuna 13 San Javier” ao amin’ny Tanànan’i Medellín any Kolombia, misy trano iray maresaka, izay miloko volomparasy isankarazany, ka antsoina araka izany, amin’ny anarana hoe Morada na koa Casa Morada (Trano Volomparasy). Miorina amin’ny toerana tena mandry fahalemana ny trano, eo anivon’ny fari-bohitra fantatra amin’ireo olana ara-tsosialy maro misy ao aminy mifamatotra amin'ny herisetra sy ny fahantrana. Trano foiben’ny fikambanana iray ho fanabeazam-boho ny zavakanto sy ny kolontsaina izy ity amin’ny alalàn’ny tetikasa samihafa, isan’izany ny foibe fampielezam-peo iray, ary koa ny momba ny asa fambolena an-tanàn-dehibe.
Ny trano moa, izay tetikasan’ny “Fundación Casa de las Estrategias” koa, ary niarahany tamina fikambanana hafa, dia mampiantrano karazan'asa samihafa isan’andro ao anatin’ny herinandro. Ny andro alatsinainy, araka ny efa fanao, atrikasa mifandraika amin’ny solosaina sy ny fikarohana ; ny Talata, atrikasa mikasika ny asa-soratra sy ny fampahafantarana ireo mpanoratra vao misandratra ; ny Alarobia, poezia sy mozika ; fianaran-kira ny Alakamisy ; ny Zoma, fampielezam-peo sy atrikasa momba ny taosary ; ary ny Sabotsy, “ Agroarte”, izay fandaharan’asa miompana amin’ny fanabeazana sy ny fambolena, ary koa fampianarana “graffiti”. Ny olon-drehetra manerana ny Tanàna — indrindra ny tanora, fa na ny olon-dehibe koa aza anefa — dia tonga manatrika izany .
Nilaza ny fikambanana hoe “ tsy manam-paniriana ny hanao fitadiavan-karena , na koa ny hampanara-dalàna , na ny hampidirana ny tenanay amin'izany izahay.“
Fikambanana iray izahay, manana foibe fampielezam-peo, habaka iray (na toeram-ponenana hita maso), hetsika, fiaraha-miasa, hamoronana, hankafizana sy handinihanay tena.
Ny fahafinaretana no manentana anay, ny hafanam-po no mampiray anay.
Mihetsika toa tambazotra iray izahay amin’ny alalàn’ny teny ifampitàna (tsilian-tsofina), miara-miròna, tsy kianja malalaka ho an'ny daholobe izahay, na koa trano koltoralin’ny Governemanta.
Raha toa ka manana tetikasa ara-javakanto ianao, ara-kolontsaina, momba ny asa fanaovan-gazety, na koa mikasika fikarohana, ary mila toerana hamoronana, hizaràna, dia raisina an-tànan-droa !
Resaka natao ho an’ny gazety miseho isan’andro El Colombiano, nentina nanamarihana ny tsingerintaona voalohan’i Morada, izay nisy hatramin'ny 2012, Lucas Jaramillo, mpikambana mpitarika ao amin'ny vondrona, no nilaza hoe:
Tonga teto izahay mba hamorona. Niainga tamin’ny fahalalahana “manao”, ka miezaka hametraka fomba fijery sarotsarotra ihany manoloana tanàna iray izay mampifoha fitiavana sy fankahalàna.
Hatramin’ny nisiany,dia nandray tetikasa samihafa ny trano, ny ara-kolontsaina, ara-javakanto an-tanàn-dehibe, toa ilay mpanao “hip-hop” sady mpanohana ara-kolotoraly Jeihhco, sahala amin'ny nanao azy ireo ho vavolombelona tsy tamin'ny nahim-pony amin'ny herisetra izay mbola manjaka mandrak'ankehitriny ao an-tanàna, araka izay voarakitra an-tsoratra tany amin'ny taona 2012 momba ireo famonoana ireo mpanao “rap” tao amin'ny faritra, Duke no nahafantarana ny iray tamin'izy ireny:
Fahanginana sy horohoro no niainana tao amin’ny “Casa Morada”, anatin'ny fari-bohitr'i San Javier. Navesatra tokoa ny rivotra niainana, telo andro monja taorian'ny nahafatesan'i “The Duke” [artista “hip-hop” nalaza teo amin’ny faritra], izay nisy namono tamin'ny faha 30 Oktobra. Raha ny hita taratra ety ivelany, dia niara-nitady ny hidiran'ny pretra iray an-tsehatra na ny mpitarika na ny mpanao “rap” tafavory tao, amin'ny fikaroham-bahaolana momba ny olan'ny fandriampahalemana rehefa naharay fandrahonana andro iray talohan'izay. […] Ny antony nitsidihana ny Casa Morada […] dia mba ahafantarana misimsy kokoa ny momba ny lasan'i Élider Varela, [fantatra amin'ny anarana hoe] “The Duke,” amin'ny maha mpanao “rap” sy mpitari-tolona eo anivon'ny fiarahamonina azy.
Tsy nampihontsona ny tarika mihitsy iny sehon-javatra iny, fa vao maika aza ny famoronana sy ny firaisankina no nasetrin'izy ireo an'ireny tranga nampalahelo ireny. Carlos Mario Cano, manoratra ho an’ny darioadn.co, mitantara:
Hetsika roa ho fanehoana ho an'ny tanàna no nipoitra avy tao amin'ny Morada: natao herinandro taorian'ny naharaisana fandrahonana an'ireo mpanao “rap” tao amin'ny (distrika) 13, ny volana Novambra tamin'ny taona lasa (2012), nidina teny an-dalam-be n y fampielezam-peo mba hanome “purple hugs – fihina volomparasy” : fihaonana natao tamin'ny mponina mba hampatsiahivana azy ireo fa adidin'ny rehetra ny mandray tsara ireo tanora izay voahosihosy ny zony.
Ny hetsika faharoa dia teraka taorian'ny namonoana ilay “mime” Julian Taborda tao an-tanànan'i Altavista. Tamin'izany, ny fiandohan'ny volana Febroarin'ity taona ity (2013), no nanapahan'ny Federasionan'ny “Parcharte” [“fanarenana”] hevitra, izay niainga avy tao amin'ny Morada koa, ny hanaovana hetsika iray ahitana fanehoana ara-kolontsaina samihafa tao amin'ity distrika ity izay ianjadian'ny herisetra.
Ny Stereo Morada ilay fampielezampeo voalaza etsy ambony, isan'ireo tetikasa fanta-daza indrindra ao amin'ny Morada. Araka ny teniny hoe :
Amin'ny alalàn'ny Stereo Morada, miezaka izahay ny hisiana media mahaleotena, tena malalaka, tsy voasivana. Hitanay avy amin’ireo olona nihaona taminay ny maha-izahay anay sy ny fitsipi-panehoan-kevitra tena izy, amin’ny alalàn’ny fikarohan-dry zareo, ny famoronany, ny fanampian’izy ireo […] Tsy misy fanamboaram-peo, tsotra, tsy misy fanomanana ara-tsoratra (scripts), tsy misy herisetra, tsy mirotoroto, tambajotra iray anà mpampiely feo sy mpanao horonan-tsarimihetsika manentana izahay. Hita eto ireo olona manolotra hevitra, maro amin’izy ireo no tsy faly, mikaroka hatrany ny fahalalàhan-tànana amin’ny fifanakalozana.
Miezaka manao izay hanomezana feo an'ireo tsy manana ihany koa izahay, toherinay ny fanavakavahana sy ny fanilikilihina, manao izay hanokàfana an’I Medellin araka ny namoronan’ny maro azy izahay, tsy misy fefy, mifanakalo amin’izao tontolo izao.
Tafaresaka tamin’I Walter Gonzales aho momba ilay tetikasa fampielezam-peo, izay nanambaràny fa ny tanjon’ny foibem-pampielezam-peo dia ny mba hanokafana hàbaka ho an’ny vahoaka eo amin’ny faritra. Tokony miasa mandritra ny roa taona ny foibe, ary toy ny fampielezam-peo virtoaly, dia manana mpihaino saika manerana ny toerana maro izy ireo :
Tetikasa iray hafa sahanin’ny “Morada” koa ny Agroarte, ”, izay tetikasa manambatra ny fambolena, ny tany, ny fanabeazana ary ny toeram-ponenana ara-tsosialy eo amin’ny tanàna. Ao amin'ny fantsona Youtube an'ny Stereo Morada dia nisy resaka nifanaovana tamin’ny @agroarte, ilay mpanao “rap” mpitarika ity tetikasa ity, izay nanazava fa ny tsirairay dia mandany ny fiainany manontolo amin’ny fianarana dia ny fianarana hatrany ary miara-misalahy amin’ny hafa koa, eny fa na dia amin’ny tontolo manodidina azy ireo koa aza :
Mba hahalalàna misimisy kokoa ny momba ny “Morada”, dia vangio izy ireo amin’ny alalàn’ny tranonkala, pejin'ny Facebook sy Twitter. Ankoatry ny fihainoana ny “Stereo Morada”, azo atao ihany koa ny manaraka azy ireo amin’ny amin'ny Facebook, tsidiho ny fantsona YouTube ary ny Mixcloud.